नेपाल आज | आमा हुनेलाई रुवाउँदै, नहुनेलाई झक्झक्याउँदै गायक शिशिर योगी (भिडियो)
कला साहित्य भिडियो कभर स्टोरी अन्तरवार्ता
शनिबार, ०५ जेठ २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज (RP)
यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा
आमा, आमा, आमा भनिरहेँ
कतै भेट भइनौ आमा, कतै भेट भइनौ !...
यो गीत गाइरहँदा गायक शिशिर योगी स्टुडियोमा पटक पटक भक्कानिए । आँसु पुछ्दै, पानी पिउँदै र रोकिँदै संगीतमा आफ्नो स्वर दिए । कारण उनलाई आमाको सम्झनाले सताइरहेको थियो । ‘आमा नहुनेहरूका लागि त गीतले रुवाएको नै छ,’ कुराकानीको क्रममा योगी भावुक हुँदै भन्छन् ‘आमा हुनेहरूलाई भने सजग गराएको छ ।’
आमाको मुख हेर्ने औँसीको दिन ‘आमा’ गीत सार्वजनिक भयो । गीतमा कवि अर्जुन पराजुलीले शब्द दिएका थिए भने संगीत थियो बिबी अनुरागीको । गीतले आमाप्रतिको प्रेम, ममता र सद्भावलाई पनि गहिरो बनाएको छ । ‘आमा जति छुच्ची भए पनि छोराको लागि प्रेम निकै गाढा हुन्छ ।’ आमाको सन्दर्भ जोड्दै उनी भन्छन् ।’
योगी आफ्नी आमा सम्झन्छन् । आमाले जन्माएको, हुर्काएको र माया ममता दिएर ठूलो बनाएको उनी बिर्सन सक्दैनन् । हृदयमा साँचिरहेको आमाप्रतिको गहिरो प्रेमलाई जतन गर्दै भन्छन् ‘मेरो आमा हुनुहुन्छ । आमा भएर पनि आमा नभएजस्तो छ । तर मेरो मनमा आमाप्रतिको श्रद्धा, प्रेम कम भएको छैन ।’
गायन उस्ताद भनी चिनिएका शिशिर योगीले स्वार्थको लागि कहिल्यै गीत गाएनन् । गाए त केवल राष्ट्रको लागि, आमाको लागि वा जीवनमा उज्यालो खोज्दै हिँडेका दुःखी मानिसहरूको लागि गाए । उसो त चर्चा कमाउने र पैसामा बिक्ने लालसा उनमा थिएन । नेपालमा टिक्न नसकेर थुप्रै गायक, कलाकारहरू विदेशिए । केवल पैसा कमाउनु उनीहरूको उदेश्य थियो । शिशिर भने यही भूमीमा डटिरहे, आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाइरहे । किनकी हृदयमा देशप्रेमलाई बचाइराख्नु र देशको लागि गाउनु उनको एकमात्र अभिप्राय थियो ।
‘भौतिक सुख र सुृविधामा मेरो ध्यान कहिल्यै गएन । म बाल्यकाल देखि नै स्वाभिमानी मानिस हुँ,’ आफुभित्रको दृढतालाई गर्वसाथ उठाउँदै भन्छन् ‘मेरो स्वाभिमानले नै मलाई यहाँसम्म पु¥यायो । यसैकारण म राम्रा सङ्गीतकार, कवि गीतकारहरूको सम्बन्धमा रहन पाएँ ।’
जीवनमा थुप्रै गीतहरू गाए पनि उनले सबै गीत छनोट गरेरमात्र गाए । त्यसकारण गम्भिर स्रोताहरूको अन्तःस्करणमा उनका गीतहरू सधैँ गुञ्जिरहन्छन् । आफ्नो यही उचाइलाई कायम गर्नकै निम्ति उनी फितलो शब्दका गीत नगाउने बताउँछन् । ‘म जुन पायो त्यही गीत पनि गाउँदिन । मलाई गीतको शब्दले पहिला छुनुपर्छ । त्यसपछि सङ्गीतले छुनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन ब्याकग्राउण्डमा बज्ने धुन, रेकर्डिङ क्वालिटी सबैले छुन सक्नुपर्छ ।’ गीतको लयजसरी बग्दै उनी भन्छन् ‘गाउँगाउँ लाग्ने किसिमको माहोल बनोस्, गाउँदै गाउँदै हृदय भक्कानियोस्, अनिमात्र त्यसले प्राण पाउँछ । अनि त्यसले सबैको मन जित्छ । मेरो सिद्धान्त यही हो । र यही सिद्धान्तमै म सधैँ अडिरहन्छु । यो मेरो भिष्म प्रतिज्ञा हो ।’
उनको यही भिष्म प्रतिज्ञाले उनलाई अहिलेसम्म अडिग बनाएको छ । तर अडिग भए पनि टिक्न निकै सङ्घर्ष छ । हरेक मानिसको जीवनमा आर्थिक पाटोले ठूलो भूमिका खेल्छ । यसैकारण धेरै सङ्गीत साधकहरू कमाउने उद्देश्यले गाउँछन् । सँगसँगै सस्तो लोकप्रियताले उनीहरूलाई लोभ्याउँछ । र बजारकेन्द्रित हुन पुग्छन् ।
तर गाउनेहरूको यही भिडमा शिशिर योगी भिन्न छन् । उनी सस्तो लोकप्रियता र चर्चित हुनकै लागि गीत गाउँदैनन् । गाउनेहरूको लागि उनी केही भन्दैनन् । उनी अरुभन्दा आफू पृथक छु भन्ने कुरामा प्रस्ट छन् । उनी थप्छन्, ‘संसारमा जति मानिस छन् कसै न कसैसँग मेल खानुपर्ने होइन र ! ती सबैको फरक फरक विचार हुन्छ । फरक फरक अनुहार हुन्छ । त्यो भिन्नता नै उसको पहिचान हो, मौलिकता हो ।’
त्यसो त योगी स्वयं पनि गायनमा मौलिकताको खोजीमा संघर्ष गरिरहेको स्वीकरा गर्छन् । र हरेक गायक वा संगीतकारका लागि मौलिकपन खोज्नु नै चुतौती ठान्छन् उनी । र त्यही मौलिकताले गायकलाई सफल बनाउँछ पनि ।
‘मानिसले विचार अनुसारको पेशा गर्ने हो । पेशा अनुसारको जस्तो जस्तो कर्म ग¥यो, फल उस्तै मिल्ने हो । म व्यक्तिगत हिसाबका कुरा गर्दा म भित्र हतोत्साहित हुने मानिस होइन । मेरो गीतहरू ओझेल परे भनेर कहिल्यैपनि चिन्ता व्यक्त गर्दिन । म सुखमा मात्तिन्न र दुखमा आतिन्न । ममा अलि फरक किसिमको विचार छ । मलाई यसैले उर्जा दिन्छ । अझै सशक्त रचना, सशक्त सृजना जुन राष्ट्रको लागि होस्, समाजका लागि होस् र पछिल्लो पुस्ताको लागि होस् ।’
मानिसहरूभित्र धेरै महत्वकांक्षा हुन्छ । अनेकथरी सपना हुन्छ । उनमा पनि त्यो महत्वकांक्षा थियो । तर जीवन बुझ्दै र भोग्दै गएपछि ती कुराहरू विस्तारै कम हुँदै गए ।’ समय चर्खा हो । जुन फर्कँदै आउँछ, घुम्दै आउँछ । त्यसैले म आधारभूत आवश्यकता पुरा हुनेसम्मको मात्र महत्वकांक्षा राख्छु ।’ शिशिर सौम्य अनुहारबाट उज्यालो मुस्कान दिँदै भन्छन् ‘त्यसैले ममा रोष, आक्रोस, द्धेष केही पनि छैन’ ।
कहिलेकाहीँ उनी आफ्ना गीतहरूमा भएको कमजोरी पनि खोतल्छन् । खोतल्दै जाँदा केही गीतहरू आफैँले सुन्न सक्दैनन् । गीतमा भएका आफ्ना त्रुटीलाई सहजै स्वीकार्दै उनी भन्छन् ‘मेरा पनि केही कमजोरीहरू छन् । जस्तै कतिपय आफैँले गाएका गीतहरू म सुन्न सक्दिन । म यहाँ चुकेछु भन्ने भान हुन्छ । आफुले गरेको कमजोरी महशुस भइसकेको छ । अब उप्रान्त कुनै पनि ठाउँमा आफु नचुक्ने प्रण गरेको छु ।’
उनको प्रणले पछिल्लो समय स्थान पाएको छ । केही दिनअघि रिलिज गरिएको ‘आमा’ गीतले उनलाई झनै हौसल्ला दिएको छ । गीतमा आमाको महानतालाई फरक ढगंले प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । आमाप्रतिको फरक मानसिकता भएका सन्तानहरूलाई गीतले राम्रो पाठ सिकाएको छ । गीतको प्रसंगलाई कोट्याउँदै भन्छन् ‘गीतमा निर्देशन पनि राम्रोसँग भएको छ । गीत बगेको छ, सबैको मन जितेको छ । अझै गीतले राम्रो रेस्पोन्स आउने कुराको आशा गरेको छु ।’
उनको गीतले स्रोता÷दर्शकहरूलाई रुवाएको मात्र छैन आमाप्रतिको प्रेमलाई बुझ्न सिकाएको पनि छ । आखिर यस्तै गीत गाउनुमा नै गायक खुसी छन् । गायकको सपना नै गीत गाउनुमात्र होइन, गीतमा मानिसलाई आमा र जन्मभूमीप्रति प्रेम गर्न सिकाउनु हो । त्यसैले उनका प्रायः गीतहरू देश, जन्मभूमी र आमाप्रति समर्पित हुन्छन् । उनको एउटा चर्चित गीत छ–
‘छाडेर काम सारा, एक काम रोजिरहेछु
यो देशमा म यौटा, मानिस खोजिरहेछु’
त्यो एउटा मानिस उनी आफैँलाई बनाउने प्रयासरत् छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । उनको स्वभाव, स्वाभिमान, राष्ट्रप्रतिको अटल प्रेमले भरिएको हृदयमा गीतजस्तै एउटा असल मानिस बाँचिरहेको छ । त्यो मानिस आफ्नो लागि हैन देशको लागि, माटोको लागि बाँचिरहेको छ, स्वाभिमानको निम्ती दुःखहरूसँग डटिरहेको छ । त्यसैले त्यो मानिस उर्फ शिशिर योगीलाई एउटा देशभक्त छोरा, स्वाभिमानी नेपाली र जनताको गायक भन्दा कुनै दुई मत छैन ।
गायक अामा गीत शिशिर याेगी